चे ग्वेभाराको जन्मस्थल बिक्रीमा ! « News24 : Premium News Channel
चे ग्वेभाराको जन्मस्थल बिक्रीमा !
एजेन्सी, १३ असार । बीसौं शताब्दीका वामपन्थी क्रान्तिका ‘आइकन’ मानिने अर्नेस्टो चे ग्वेभाराको जन्मस्थल बिक्रीमा राखिएकाे छ । अर्जेन्टिनाको रोजारियो शहरमा उनी जन्मेकाे घर बेच्न लागिएको हाे ।
शहरको केन्द्रमा अवस्थित २ हजार ५८० वर्ग फुट क्षेत्रफलमा रहेकाे विशाल घर, जहाँ चे ग्वेभारकाे जन्म भएकाे थियाे, उक्त घरका मालिकले बेच्न लागेका हुन् । घरका मालिक फ्रान्सिस्को फरूर्जियाले भनेका छन् कि उनले उक्त घर सन् २००२ मा किनेका थिए।
फ्रान्सिस्को भन्छन् कि उनी यो घरलाई सांस्कृतिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्थे, तर उनको योजना वास्तवमै यथार्थमा परिणत भएन। यद्यपि यस अर्जेन्टिनी व्यापारीले यस घरको लागि केकति मूल्य राखेका छन् खुलाएका छैनन् ।
धेरै वर्षदेखि हजाराैँ मानिसहरू चे जन्मेकाे याे विशाल भवन हेर्न आएका छन् । यस घरमै सन् १९२८ मा चे काे जन्म भएकाे थियाे । उनी हुनेखाने मध्यमवर्गीय परिवारमा नै जन्मेका थिए । तर उनले दक्षिण अमेरिकामा गरीबी र भोक देखेर क्रान्तिको बाटो अपनाए।
याे घर हेर्न आएका प्रसिद्ध व्यक्तिहरुमा उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति जोसे पेपे मुजिसा र क्युवाली क्रान्तिकारी नेता फिदेल क्यास्ट्राेका बच्चाहरु मुख्य मानिन्छन् ।
क्युवाली क्रान्तिमा चे ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस क्रान्तिमा फुल्जेन्सिको बटिस्टाको तानाशाही शासन हटाइयो। त्यसपछि, चे ग्वेभाराले क्रान्तिको दायरा सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिका र विकासशील देशहरूमा पुर्‍याउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। अनि चे क्युबाबाट बोलिभिया सरेका थिए, जहाँ उनले राष्ट्रपति रेने ब्यारिएन्टोस ओर्टोनोको बिरूद्ध विद्रोही सेनाको नेतृत्व गरेका थिए।
तर अमेरिकाको सहयोगमा बोलिभियाको सेनाले चे र उनका बाँकी लडाकुहरूलाई समात्यो। अनि अक्टुबर९, १९६७ मा ‘ला हिग्युरा’ भन्ने एक गाउँमा चे ग्वेभाराकाे ह’त्या गरियो र उनको शव एउटा गोप्य ठाउँमा राखियो। पछि सन् १९९७ मा मात्र उनकाे लास राखिएकाे गोप्य ठाउँ फेला परेको थियो । त्यसपछि चे का अन्तिम अवशेषहरू क्युबामा ल्याइएको थियो र उनकाे अन्तेष्टि गरियो। (बिबिसी हिन्दीबाट अनुदित)
उत्तर कोरियामा नेटफ्लिक्स सिरिज स्क्विड गेमको कपि बेच्ने विद्यार्थीलाई मृत्युदण्ड
काठमाडौं । उत्तर कोरियामा नेटफ्लिक्स सिरिज स्क्वीड गेमको कपि बेच्ने विद्यार्थीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छ